निर्वाचनमा कसको जित, कसको हार ? यहां छ पछिल्लो अपडेट | We Nepali
निर्वाचनमा कसको जित, कसको हार ? यहां छ पछिल्लो अपडेट
वीनेपाली | २०७४ जेठ ३ गते १२:०८
काठमाडौँ महानगरपालिका– १ को वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठले एक हजार ३५ मत ल्याई विजयी हुनुको साथै महिला सदस्यमा एमालेकी रसला तण्डुकारले ८९१, दलित महिला सदस्यमा एमालेकै मीना सुनुवारले ७९६, खुल्ला सदस्यमा एमालेका अशोक श्रेष्ठले ६५४ र काँग्रेसका राजकुमार श्रेष्ठले ६८१ मत ल्याई विजयी । तस्बिर ः रोशन सापकोटा, रासस
काठमाडौँ, ३ जेठ । काठमाडौँ महानगरपालिका– १ को वडाध्यक्षमा नेकपा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ एक हजार ३५ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ ।
उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका भोला थापाले ६३९ मत प्राप्त गर्नुभयो । महिला सदस्यमा एमालेकी रसला तण्डुकारले ८९१, दलित महिला सदस्यमा एमालेकै मीना सुनुवारले ७९६ ल्याई विजयी हुनुभयो ।
यस्तै खुल्ला सदस्यमा एमालेका अशोक श्रेष्ठले ६५४ र काँग्रेसका राजकुमार श्रेष्ठले ६८१ मत ल्याई विजयी हुनुभयो । सो वडामा कुल दुई हजार ३३१ मत खसेको थियो भने ५९ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
बनेपा ५, ६, ७ मा एमाले विजयी
काभ्रे, ३ जेठ । काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं ५, ६ र ७ मा एमालेका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
बनेपा नगरपालिका वडा नं– ५ को वडाध्यक्षमा एमालेका बलराम अधिकारी ११६० मत ल्याइ विजयी हुनुभएको छ भने वडा नं– ६ मा एमालेकै सतितानन्द केसीले ५७७ मतले विजयी भएको छ । यसैगरी वडा नं ७ मा एमालेकै वर्ण शाक्य ८४९ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ ।
मेलम्ची– ६, ७ र ८ मा एमाले, ९ मा काँग्रेस विजयी
मेलम्ची, ३ जेठ । मेलम्ची नगरपालिका– ६, ७ र ८ मा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ भने सोही नगरपालिकाको वडा नं– ९ मा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ ।
नगरपालिकाको वडा नं– ६ को वडाध्यक्षमा एमालेका जितराज थापाले ८०४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका प्रेम तामाङले ६२५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यसैगरी सोही नगरपालिकाको वडा नं ७ को वडाध्यक्षमा एमालेका ज्ञानु श्रेष्ठले एकम हजार ९९ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका ज्यानबहादुर तामाङले ७२२ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
सो नगरपालिकाको वडा नं– ८ को वडाध्यक्षमा एमालेका छङ्कराज गिरीले ३६४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका जितबहादुर दोङले ३२७ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
यस्तै सो नगरपालिकाको वडा नं– ९ को वडाध्यक्षमा काँग्रेसका कमलबहादुर खड्काले ९२८ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका ठाकुरप्रसाद कुँइकेलले ६५८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यसैगरी मेलम्ची नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामअनुसार नगर प्रमुखमा नेकपा (एमाले)का डम्वर अर्यालले पाँच हजार ५५५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका आइतमान तामाङले चार हजार ९४२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का श्याम खड्काले दुई हजार ३२२, राप्रपाका फणिन्द्र दाहालले दुई हजार एक मत प्राप्त प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यस्तै सो नगरपालिकाको नगर उपप्रमुखमा एमालेका भगवती नेपालले पाँच हजार ७४७, काँग्रेसका सविता गुरुङले चार हजार ७१९, राप्रपाका कुमारी तामाङले दुई हजार १६५ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुनादेवी ढकालले एक हजार ९९८ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
सल्यानमा तीन गाउँपालिका र ५३ वडाको नतिजा सार्वजनिक
सल्यान, ३ जेठ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आज बिहानसम्म तीन गाउँपालिका र ५३ वडाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
चितवन, ३ जेठ । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा नेकपा (एमाले) का देवीप्रसाद ज्ञवालीको अग्रता कायमै रहेको छ ।
उहाँले दुई हजार ७४९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले एक हजार ८६९ र राप्रपाका बद्री तिमिल्सिनाले १८४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
उपप्रमुखमा काँग्रेसकी पार्वती शाहले दुई हजार २८९ मत पाउनु भएको छ भने एमालेकी दिब्य शर्मा आचार्यले दुई हजार २६६ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । राप्रपाकी रिना गुरुङले २२३ मत पाउनु भएको छ ।
बँेसीसहर (लमजुङ), ३ जेठ । लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काँग्रेसका रमेशकुमार पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मोहनहरि पौडेललाई एक हजार ४२१ मतले पछि पार्दै पाँच हजार ९६८ मत ल्याएर पाण्डेले जित हात पार्नुभएको हो । पौडेलले चार हजार ५४७ मत ल्याउनुभएको थियो ।
यसैगरी उपप्रमुख पदमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार राजकुमार श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका सीता शाहीलाई २३४ मत अन्तरले पराजित गर्दै श्रेष्ठ विजयी हुनुभएको हो ।
श्रेष्ठले पाँच हजार ५६६ र शाहीले पाँच हजार ३३२ मत ल्याउनुभएको छ । प्रमुखमा निर्वाचित पाण्डे नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्य एम्व तरुण दल लमजुङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उपप्रमुखमा निर्वाचित श्रेष्ठ एमालेको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ ।
मध्यनेपाल नगरपालिकाको वडा नं १ को अध्यक्षमा काँग्रेसका चन्द्रमणि पौडेल, वडा नं–२ को अध्यक्षमा काँग्रेसका पदमबहादुर थापा, वडा नं– ३ को अध्यक्षमा एमालेका नेत्रबहादुर बस्नेत, वडा नं– ४ को अध्यक्षमा एमालेका निर्मल गौतम, वडा नं– ५ को अध्यक्षमा काँग्रेसका बालकुमार जोशी निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यस्तै वडा नं– ६ को अध्यक्षमा (माओवादी केन्द्र)का विष्णुभक्त पौडेल, वडा नं– ७ को अध्यक्षमा काँग्रेसका गगन घिमिरे, वडा नं ८ को अध्यक्षमा एमालेका अमृत तामाङ, वडा नं ९ अध्यक्षमा एमालेका सूर्यबहादुर कुँवर र वडा नं १० को अध्यक्षमा काँग्रेसका रामचन्द्र भण्डारी निवाचित हुनुभएको छ ।
गोरखामा विजय मनाउँदै गोरखा नगरपालिका–५ मा रामशरण अधिकारी र ६ मा नारायणप्रसाद अर्यालको समूह निर्वाचित भएपछि विजय मनाउँदै नेपाली काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता । तस्बिर ः प्रशन्न पोखरेल, गोरखा, रासस
नवलपरासी, ३ जेठ । नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्भवतः नेपालमा पहिलो पटक महिला उम्मेदवार विजयी बन्नुभएको छ ।
बाबियाचौर (म्याग्दी), ३ जेठ । बेनी नगरपालीकाका वडा नं ४, ५, ६ र ७ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।
बेनपा–४ को वडा अध्यक्षमा एमालेका गोविन्द पौडेलले ४९४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको हो । पौडेलका प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी केन्द्रका अणबहादुर खड्का भगवानले ४२५ र नेपाली काँग्रेसका मिनबहादुर बानियाँले ४०५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
वडा नं ७ को अध्यक्षमा एमालेका राजेन्द्र श्रेष्ठले ३३२ मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका रमेश श्रेष्ठले २७९ मत प्राप्त गर्नुभएको । सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका शेरबहादुर केसी, राप्रपाका हरिबहादुर शाक्य, एमालेकी टकसरा राना र शर्मिला पुन किसान निर्वाचित हुनुभएको छ ।
बेनी नगरपालिकाको वडा नं ८, ९ र १० को मतगणना सकिन बाँकी छ । वडा नं १ मा एमालेका टेकबहादुर रावल, २ मा एमालेका हीराबहादुर थापा र ३ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पदम पुन निर्वाचित हुनुभएको छ ।
सिन्धुली, ३ जेठ । फिकल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा (एमाले)का घनश्याम कार्कीले तीन हजार १२६ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ ।
उहाँका निकटतम प्रतिद्धन्द्वी नेपाली काँग्रेसका मोहनबहादुर कार्कीले दुई हजार ७२७ मत प्राप्त गर्नुभयो । उपाध्यक्षमा एमालेकै पार्वती सुनुवार तीन हजार २१४ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका यशोदाकुमारी घिमिरेले दुई हजार ७२३ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
यस्तै फिकल गाउँपालिकाका ६ वटा वडामध्ये दुईवटा वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस र चारवटा वडाध्यक्षमा एमाले विजयी भएको छ । वडा नं– १ को वडाध्यक्षमा काँग्रेसका चेतबहादुर विश्वकर्माले ६०० मत तथा वडा नं–६ को वडाध्यक्षमा काँग्रेसकै खड्ग नेपाली ५३० मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ ।
यस्तै वडा नं २, ३, ४ र ५ को वडाध्यक्षमा एमाले विजयी भएको छ । वडा नं २ को वडाध्यक्षमा शङ्कर भण्डारी ६७३, वडा नं ३ को वडाध्यक्षमा टेकबहादुर रजनमगर ६४७, वडा नं ४ को वडाध्यक्षमा गोपालबहादुर मगर ६६९ तथा वडा नं ५ को वडाध्यक्षमा राजु बराल ५७४ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ ।
सिन्धुलीका ९ वटा तहमध्ये पाँच गाउँपालिकाको मतगणना कार्य सम्पन्न भएको छ । कमलामाई, दुधौली, तीनपाटन नगरपालिका तथा सुनकोसी गाउँपालिकाको मतगणना कार्य चलिरहेको छ ।
मेलम्ची– १० मा काँग्रेस विजयी
मेलम्ची, ३ जेठ । मेलम्ची नगरपालिका– १० मा नेपाली काँग्रेस विजयी भएको छ । नगरपालिकाको सो वडाको अध्यक्षमा काँग्रेसका भक्तबहादुर खड्काले ६५९ मत प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका टेकबहादुर तामाङले ५४५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । सो वडामा काँग्रेसका तीन जना र राप्रपाका एक जना वडा सदस्यमा विजयी भएका छन् ।
यसैगरी मेलम्ची नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामअनुसार नगर प्रमुखमा नेकपा (एमाले)का डम्वर अर्यालले पाँच हजार ९९५ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपाली काँग्रेसका आइतमान तामाङले पाँच हजार ५०० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का श्याम खड्काले दुई हजार ६०४ र राप्रपाका फणिन्द्र दाहालले दुई हजार ५७९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
यस्तै सो नगरपालिकाको नगर उपप्रमुखमा एमालेका भगवती नेपालले ६ हजार २३३, काँग्रेसका सविता गुरुङले पाँच हजार ३३२, राप्रपाका कुमारी तामाङले दुई हजार ७१२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुनादेवी ढकालले दुई हजार १९० मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
बुलिङटारमा काँग्रेस विजयी
नवलपरासी, ३ जेठ । बुलिङटार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चार हजार ७०८ मत ल्याई काँग्रेसका शशीकरण बस्ताकोटी विजयी हुनुभएको छ ।
उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले)का विद्रोही गरीले दुई हजार ५५० मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उपाध्यक्षमा काँग्रेसका मैना विक चार हजार ६५३ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका पार्वती थापाले दुई हजार ६१३ मत प्राप्त गर्नुभयो ।
यसअघि जिल्लाको हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी र बुङ्दीकाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा काँग्रेस विजयी भइससेको छ । एउटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा एमाले र तीनवटा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा काँग्रेस विजयी भएको छ ।